Isipele Samandla se-2BHK AC Wi-Fi eduze nolwandle lwase-Calangute
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Indrajit
I-2BHK/2Bath/2Balcony Air-conditioned Bedroom efulethini, amaminithi amabili ukushayela ukuya eCalangute Beach, 10 min ukuhamba ngezinyawo. Ku-Candolim-Calangute Road eduze kwehhovisi laseCalangute Panchayat. 1.3 km ukusuka eCalangute Beach.
Ku-Calangute Main Road, indawo kodwa ezolile. Ubumfihlo obuphelele, indawo yokupaka evulekile yamahhala
Ama-AC amabili, eyodwa kuma-BEDROOM
Ifulethi i-F-3, i-Emida Apartments, eduze kwe-Kenny's Breakfast n Calangute Panchayat kanye nebhodi likagesi
Yenza uhambo lwakho lwe-Goa lukhumbuleke ngokuhlala ngokunethezeka nathi endaweni yethu yokuhlala e-Calangute etholakala e-EMIDA Apartments. I-Air-conditioned, AC 2BHK enamagumbi okugezela angu-2, ovulandi ababili, imibhede emibili engashadile ekamelweni ngalinye, Omatilasi ababili abengeziwe basho ukuthi banele ukuhlalisa amaqembu abantu abangafika kwabayi-6, i-LED TV enokuxhumeka kwekhebula, usofa, i-Ayina ibhodi, ilineni elisha, Ikhishi eligcwele, i-Power Back-up yabalandeli namalambu, Indawo Yokubhemela kuma-balcony, sonke sikhavwe.
Uma uhamba nezingane ezincane, sicela usazise, uzobeka ubisi nezinye izinto ezibalulekile ngaphambi kokufika.
Essential Kits ezifana
✓ Ama-AC e-BEDROOM kanye ne-geyser endlini yokugezela
✓ Imidlalo Yasendlini- I-Ludo, i-Chess, i-UNO, i-ZENGA, Amakhadi Okudlala ayatholakala
✓Insipho Yokugeza/Yokugeza Pdr/into yokuxubha
✓Ibhokisi Losizo Lokuqala
✓Amashaja Efoni zonke izinhlobo
✓I-Dish TV Connection ku-LED
✓I-Gas Cylinder, isitofu, izitsha, i-toaster, i-Crockery, i-Cutlery, i-Glassware, izitsha zokupheka,
✓Amanzi amaminerali angama-20ltr
✓ Amanabukeni eSanitary namanabukeni
✓ Ukuhlanza & Mopping kanye njalo ezinsukwini ezimbili
Ukuqinisekisa ukuthi awudingi ukukhathazeka nganoma yini uma uhlala nathi.
Indawo emaphakathi kakhulu nokho kude nomgwaqo omkhulu onothuli futhi onomsindo, indawo yethu ilungile
✓ 1300 mtr noma 11 min ukuhamba ukusuka ebhishi laseCalangute kanye
✓Khona ku-Candolim-Calangute-Baga Main road.
✓Kuthatha ngaphansi kwemizuzu emi-3 ngebhayisikili/emotweni ukufika ogwini.
✓Ama-ATM, Izindawo zokudlela, Ibhikawozi, Igrosa, Ukuqasha Ibhayisikili/Imoto ebangeni lokuhamba ngezinyawo.
Amabanga ukusuka kule ndawo:
Ibhishi laseCalangute: 1300mtrs
✓I-Mapusa/Panjim Bus Stand- 10km/11km
Isikhathi Sokungena-- Ngemva kuka-1PM
Isikhathi Sokuphuma--Ngaphambi kuka-11AM
I-IMP: Ngokungena/ukuphuma ngemva kuka-8 PM, kuzoba nemali ekhokhwayo yama-rupee angu-200 ngokuya ngokutholakala. Lesi samba siya ekunxephezeleni umnakekeli ukuhamba esuka endaweni yakhe ukuze ahlole izihambeli zokungena/eziphumayo kanye nemizamo yokubuya neyokuphuma emsebenzini.
✓✓VV IMP: ngomusa funda isigaba "Amanye Amanothi" mayelana nokungena, hlola imithetho, idiphozi yokuphepha kanye nokhiye.
✓2/4 Izinsiza zokuqasha amasondo ayatholakala
IMP KAKHULU, Sicela uqaphele:
✓ Amanzi ompompi anele atholakalayo. 20ltr Ibhodlela Lamanzi liyatholakala
✓ Isikhathi Sokungena singo-2PM kuye phambili, Isikhathi Sokuphuma ngu-1100hrs ekuseni.
✓ Ukungena kusenesikhathi kungacatshangelwa KUPHELA uma kushiwo kusengaphambili ngosuku olulodwa futhi ngenkokhiso ye-ADDLN yama-rupees angu-800 FUTHI ngokuya ngokutholakala.
✓ Ukuphuma Sekwephuzile kungabhekwa kuphela Ngokusekelwe Ekutholakaleni kanye nenkokhelo ye-ADDLN yama-rupees angu-800
✓ Ikhophi kamazisi eyodwa yoqobo yesivakashi ngasinye kanye Nediphozithi Ebuyiselwayo yama-rupee angu-2000 kudingeka ukuthi ifakwe ngesikhathi sokungena. Lokhu maqondana nokuphepha kwempahla nokhiye bendlu.
✓ Uma okhiye bangempela bendlu belahleka, kuzodonswa inani lama-rupee angu-1000 ediphozini liye ezindlekweni zokushintsha ukhiye.
✓ Uhlu lwempahla yazo zonke izinto ezisendlini kanye nezindleko zokushintshwa kuyatholakala kumnakekeli. Uma kuba khona noma yimuphi umonakalo, izindleko zokumiselela zizodonswa ediphozini.
Leli fulethi liphakathi nendawo emgwaqeni omkhulu. zonke izindawo ezenzekayo endaweni ye-calangute ziphakathi kwe-1km. I-KFC kanye ne-Dominoes konke kungakapheli u-200mtr ukusuka endaweni.
Sawubona bangane, ngingu-Indrajit, nginobungani, ngijabule, ngiyakuthanda ukuvakasha nokuhlangana nabantu abasha. Thanda yonke into nge-Goa, amandla ewavezayo, inhlonipho abantu bayo abanayo kubantu bebonke futhi ikakhulukazi abesifazane, ukuphila kwayo okuzibekile phansi. Ngikuthanda kakhulu ukuhamba. kuyiphupho lami ukuya e-Austria nakwamanye amazwe aseYurophu ngolunye usuku. Ukubona injabulo ebusweni babantu uma bezohlala efulethini lami kuyithuba elikhulu kimina. I am die hard fan of travelling, ukudla okuhle, cuisine exquisite, amasiko ehlukene. Ngike ngaba yisivakashi se-airbnb izikhathi ezimbalwa futhi ukuzizwisa bekulokhu kuphezulu eshalofini njalo. ngokungangabazeki inkundla engcono kakhulu yokuhlala nokuhlangana nabantu nezindawo ezintsha. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nami ezinkundleni zokuxhumana ezibonisiwe. Ngisebenza kahle futhi ngiphendula cishe ngokushesha. ngiyabonga ngokuba nesineke ngokwanele ukufunda zonke lezi futhi ngithemba ukukubona eduze
✓Ngihlala ngitholakala ocingweni nakuWassap.
✓Umnakekeli wendawo uzoqinisekisa ukuthi wamukelekile futhi wamukelwe.
✓Sizodinga imininingwane yakho yokufika eqinile ukuze sikwazi ukungena kalula futhi ngokushesha.
✓Pl thintana uma kwenzeka udinga usizo lokufinyelela e-Calangute usuka esikhumulweni sezindiza.
✓Ngihlala ngaphandle kwe-Goa kodwa ngivele ngishaye ucingo/nge-wassap.
✓Uma ngenxa yesizathu esithile ngingakwazi ukuthatha ucingo ngicela ushiye umlayezo noma i-wassap futhi ngizobuya ngokushesha ngangokunokwenzeka.
✓Inombolo yomnakekeli izonikezwa lapho ubhukha kunoma yiziphi izinkinga obhekane nazo ngesikhathi uhlala noma yiluphi olunye usizo oludingekayo.
✓Abasebenzi bathembeke kakhulu. Nokho, sicela ugcine izinto zakho ezibalulekile zikhiyiwe. Uma kwenzeka kuba nobudedengu, uma kulahleka izinto ezibalulekile, ngeke sithweswe icala.
Sawubona bangane, ngingu-Indrajit, nginobungani, ngijabule, ngiyakuthanda ukuvakasha nokuhlangana nabantu abasha. Thanda yonke into nge-Goa, amandla ewavezayo, inhlonipho abantu ba…
UIndrajit Ungumbungazi ovelele